Ayikho mkhuba noma umcimbi ingekho todvwa, esikhaleni nje. Akulona igama elilodwa alisetshenziswa "ngokwalo" - nanoma iyiphi enye. Yokuqukethwe - a term ethathwe Latin (contextus Latin.). Ubiza ubudlelwane, ukuxhumana, imvelo.
Kunzima ukuthola indawo lapho lesi simanga ngeke uthole ukusetshenziswa lapho kuyoba abangelutho. Esimeni semakhaya izwi kungathatha ezihlukahlukene amagugu, okusho shades - kuze kube okuphambene (isib, uma lalisetshenziswa kuyindida noma ukubhuqa). Ngolimi, njengasezulwini ekuchumana, ukuchasiswa ukudlula umbhalo, inkulumo noma isisho incike obekushiwo (okusho) ngaphambi nangemva. Ngokwesibonelo, i-elithi "ulwandle" umongo ngqo - semali amanzi, kodwa amagama athi "isihlabathi kolwandle", sisuke ebhekisela ehlane. Ithokheni elisetshenziswe lapha njengesingathekiso lapho bebhekisela. Lisho ukuthini igama elithi "ulwandle" ibonwa lapho bekhuluma "omningi", "okuthile okukhulu."
Emkhakheni wezingalo zokuxhumana inkulumo kokuziba "imvelo", emkhathini, isimo ingxoxo kungaholela hhayi kuphela ukudideka kodwa futhi ezingxabanweni. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile kakhulu kule ndawo kanye umongo kwamasiko. Lokhu ngokuvamile iyisici kokunquma angaphazamisa ngokuphelele nengxoxo, futhi izenzakalo zesikhathi esizayo. Ngokwesibonelo, eFrance, lapho ebingelela evamile ukuba ukuqabula isihlathi, ngisho naphakathi kwabantu engajwayelekile. Kanti eJapane noma UK isenzo esinjalo uzobe waqonda ezingezona ezemvelo, obuseduze kakhulu.
Ngo yezilimi, ukutadisha zokuxhumana womuntu sikhuluma ikakhulukazi mayelana umongo phraseological (collocations netisho value), kanye nesimo. Endabeni le yokugcina yizici ezibalulekile ezifana isikhathi, isikhala, sphere: emihlanganweni ibhizinisi, izinkulumo, izingxoxo zomkhaya, mpikiswano, kanye nemicimbi yangaphambilini zokuxhumana. Obalulekile futhi abambe iqhaza enqubeni zokuxhumana kanye izindima ukuthi zingabantu, isibonelo: umeluleki, umngane, lover. umongo nesimo - liphinde umgomo, izinhlelo, izinhloso kanye nolwazi interlocutors. Akukhona njalo sobala, kodwa ezihleli "Amathrendi", ezifana imicabango nemizwa abaphikisi, kubalulekile kakhulu ukuqonda okushiwo lonke. Ngokwesibonelo, engxoxweni ngekusasa iziboshwa ngezindlela ezahlukene ngokuphelele abantu baziphathe abanolwazi ejele noma ukuvalelwa ejele, futhi labo abaye ungazimbi wobulelesi.
Okunye wesayensi owasebenzisa leli gama ukuveza ubudlelwane (ngezinye izikhathi akude kakhulu) izenzakalo ezithile noma izenzakalo. Umongo izincwadi kungenzeka zomlando, kwezobuciko, ngemibono. Akekho umkhiqizo alikho ngaphandle isikhathi nendawo. Yiqiniso, i-degree ukuthembeka iqiniso liwukuthi zihluke kakhulu, kuye ngohlobo kanye uhlobo. Nokho, izinkondlo kanye temibhalo yephrozi netindzaba esigcwele emkhathini, amagugu, imibono yabantu likhona. Bunin sika "Dark ezizungezile" nokuzala hhayi kuphela Russia zangaphambi wamavukelambuso, kodwa futhi izimpilo ekudingisweni waseParis labangela ukuqala komkhakha. Futhi "Impi Nokuthula" umongo UTolstoy izindawo zamasiko nezomlando - sekuyiminyaka eyishumi noma amabili yekhulu nesishiyagalolunye. Njengoba lizungezwe izwe imiqondo ethile, kungabhekisela (ibhekisela abanye iqiniso noma into ongakakusho ngqo), amagama athathe nencazelo entsha. Kufanekisa kungahunyushwa kuphela umongo Macro - okungukuthi, ngezinga ka wonke umsebenzi, egcwele umbhali, ubudala, izinkomba. imihlola ezithile kungabonwa yaphelela kuphela mayelana biography of umsunguli wawo noma umnikezi amafilosofi yakhe. Ngokwesibonelo, e Voronezh umongo - iwukuba Osip Mandelstam, endaweni ababedingiselwe kuyo, hhayi ithuba, futhi amalungu afanayo associative, ehambisana ne-dolobha, okusikhumbuza into elibuhlungu, elibuhlungu: "Voronezh - igwababa, ummese." ukwazi indlela yokuphila imbongi kuphela, singakwazi-United States wokufunda izimpawu. Noma yimuphi leligama kulenkhulumo kusebenze ukubaluleka yakho aphathwayo noma neuropathy.
Ukuhlaziywa kwe-inkondlo feta "Whisper. Umoya unamahloni ..."
Ukugqoka izikhali bladed - ke kubalulekile ukwazi!
Ithanga izitsha izingane: iphalishi kanye sikadali iresiphi